ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတှကေို ပွနျလညျသိမျးပိုကျတော့မဲ့ ဖွူဖွူထှေး – XB Media & News
ဖွူဖွူထှေးကတော့ကိုယျပိုငျစိတျကူးလေးတှနေဲ့ကွျောငွာတှကေို ရိုကျကူးပွီးပရိသတျအခဈြတှကေို ရယူထားနိုငျသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ. . ဖွူဖွူ ထှေးကတော့ မိသားစုလိုကျ ရိုးသားဖွူစငျခွငျးတှနေဲ့အတူ အလှူအတနျးတလေ့ညျး ရကျရောတယျဆိုပွီးတော့ ပရိသတျ
မြားကလညျး ခဈြပေးခဲ့ကွပွနျပါတယျ။ နိုငျငံရေးမတညျငွိမျနတေဲ့ အခြိနျကာလအတှငျးမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ တိတျဆိတျ ငွိမျသကျနခေဲ့ပွနျပါတယျ. .. အနုပညာရှငျတျောတျောမြားမြားလညျး တရားသောဘကျနှငျ့ မတရားသောဘကျကို
လူသားခငျြးသိတတျစှာဖွငျ့ သိတတျခဲ့ကွပွီး ပွညျသူလူထုနဲ့အတူ ရပျတညျခဲ့ကွပမေဲ့ အဲထဲမှာ ဖွူဖွူထှေးကတော့တိတျဆိတျနခေဲ့ ပွနျ ပါတယျ။ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျ ပွညျသူတှအေတှကျ အအေးဗူးတှေ ထှကျပွီးကမျးလှမျးခဲ့ပမေဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူမ
အပျေါမှာ ခဈြတဲ့အခဈြတှအေစား ဝဖေနျမှုတှသော တိုးနခေဲ့ပွနျပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ အားလုံးကို လှမျးနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျး တှကေလညျး တငျလာခဲ့ပွီးနောကျ အလှူအတနျးဆို ရကျရောတတျတဲ့ ဖွူဖွူထှေးတဈယောကျကတော့ သူမ တတျနိုငျ
သလောကျ လှူဒါနျးမှုလေးတှတေော့ အမွဲပွုလုပျလကျြရှိပါတယျ။ ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ဖွူဖွူထှေးက ခဈြစဖှယျဟနျပနျလေးနဲ့ ပုံလေးတှကေို Instagram မှာတငျပေးလာတာ ဖွဈပါတယျနျော.. သူမကတော့‌ ဖဘေု့တျစာမကျြနှာထကျမှာ ပြောကျကှယျသှားပမေဲ့
Instagram မှာပဲ တငျပေးနပွေီး အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ ပွနျလညျထိုးဖောကျလာပွီဖွဈပါတယျနျော….Cele Wolrd ပရိသတျကွီး လညျး ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ပုံလေးတှေ ကို ကွညျ့ပွီး ခဈြပေးကွပါအုံးနျော…
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပြန်လည်သိမ်းပိုက်တော့မဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဖြူဖြူထွေးကတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ကြော်ငြာတွေကို ရိုက်ကူးပြီးပရိသတ်အချစ်တွေကို ရယူထားနိုင် သူေ လးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. . ဖြူဖြူ ထွေးကတော့ မိသားစုလိုက် ရိုးသားဖြူစင်ခြင်းတွေနဲ့အတူ အလှူအတန်းေ တ့လည်း ရက်ရောတယ်ဆိုပြီးတော့ ပရိသတ်
များကလည်း ချစ်ပေးခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်နေတဲ့ အချိန်ကာလအတွင်းမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ေ ယာက် တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက်နေခဲ့ပြန်ပါတယ်. .. အနုပညာရှင်တော်တော်များများလည်း တရားသောဘက်နှင့် မတ ရားသောဘက်ကို
လူသားချင်းသိတတ်စွာဖြင့် သိတတ်ခဲ့ကြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ရပ်တည်ခဲ့ကြပေမဲ့ အဲထဲမှာ ဖြူဖြူထွေးကတော့တိတ်ဆိတ်ေ နခဲ့ ပြန် ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက် ပြည်သူတွေအတွက် အအေးဗူးတွေ ထွက်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ ပရိ သတ်တွေကတော့ သူမ
အပေါ်မှာ ချစ်တဲ့အချစ်တွေအစား ဝေဖန်မှုတွေသာ တိုးနေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ အားလုံးကို လွမ်းနေတ ယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း တွေကလည်း တင်လာခဲ့ပြီးနောက် အလှူအတန်းဆို ရက်ရောတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးတစ်ယောက်ကေ တာ့ သူမ တတ်နိုင်
သလောက် လှူဒါန်းမှုလေးတွေတော့ အမြဲပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးက ချစ်စဖွယ်ဟန်ပ န်လေးနဲ့ ပုံလေးတွေကို Instagram မှာတင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. သူမကတော့‌ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာထက်မှာ ပျောက်ကွယ်သွားပေမဲ့
Instagram မှာပဲ တင်ပေးနေပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ပြန်လည်ထိုးဖောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်နော်….Cele Wolrd ပရိသတ်ကြီး လည်း ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ပုံလေးတွေ ကို ကြည့်ပြီး ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်…